I-Estline srl Ngenisa Ngaphandle Ukuthekelisa Imarble YaseGibhithe Nefenisha Yekhishi - Santo Domingo
I-Estline - I-European Marble neFenisha Yekhishi laseYurophu
Ngenisa okokuthengisa okuthekelisa ngaphandle kwe-Fine Egypt Marble ne-European Modular ekhishini kanye neFenisha yaseKhishini
Supply kuphela Umsebenzi wokufaka awenziwa
4.7 /5 amavoti (amavoti angama-23)
I-Estline srl di UGiovanni Mazzù, eCalle Sanchez 21, a Santo Domingo, kunjalo Umthengisi e Ngenisa ukuthumela ngaphandle di Imabula yaseGibhithe Ibalulekile emkhakheni wezokwakha, ilungele ikakhulukazi ukutholwa kokugqokwa. Ngaphezu kwalokho, I-Estline srl è Ngenisa ukuthumela ngaphandle di Amakhishi WaseYurophu Ephakathi kanye nefenisha ekhishini yekhwalithi ephezulu kakhulu futhi enziwa ngokwezifiso ngokwedlulele. Amanani we-FOB.
I-Estline srl eSanto Domingo - I-wholesaler Ngenisa Ukuthekelisa Kwamamabula WaseGibhithe
I-Estline srl di UGiovanni Mazzù, a Santo Domingo, ungumholi ku Ngenisa ukuthumela ngaphandle di Imabula yaseGibhithe Ibalulekile ekwakheni. Ngenxa yokubambisana okuhlangene nabakhiqizi abahle kakhulu be Imabula yaseGibhithe Ibalulekile ekwakheni, I-Estline srl ukhetha ngokucophelela iMabula yaseGibhithe elandela amazinga aphezulu kakhulu: ubuhle, umbala, umsebenzi / ukubumbeka, ukumelana kokugqoka. I-oda ngalinye le Izinto zokwakha futhi of Imabula yaseGibhithe kulandelwa esigabeni ngasinye futhi kufundwa ngemininingwane emincane kakhulu. Ikakhulu, i Imabula yaseGibhithe zikhethwe ngokucophelela futhi basebenze ngokukhethekile ukwakha imbobo yokunethezeka, imikhiqizo ekhethekile neminye imisebenzi eminingi ebalulekile yokwakha. THE Imabula yaseGibhithe, zazo Qeda è Ngenisa Umthengisi Womkhiqizo Othengisa Ngaphandle Kanye Nomphakeli, Ngi imikhiqizo yemvelo yobuhle obungapheliyo obaboleka ngokwabo ngokuphelele njengoba Izinto zokwakha kusetshenziswe lapho ukusesha kobuhle nokuhluka kweMarble kuzohlinzeka ngembobo ehlonishwayo nokudalwa kwenani eliphakeme. Qeda di UGiovanni Mazzù, a Santo Domingo, uyazi ukuthi i Imabula yaseGibhithe ukulala impahla efanelekile yokufinyeleleka kwengubo yokunethezeka ekhishini, indlu yokugezela, ukwakhiwa kwamakholamu, phansi, ukuqeda, imicengezi neminye imisebenzi eminingi yokwakha efuna ukubaluleka ikakhulukazi. IMarieriali Yezokwakha okukhethekile futhi kukhethwe ngokucophelela kusuka kubakhiqizi abahle kakhulu, i Imabula yaseGibhithe baphathwe ngu Hola nguGiovanni Mazzù ziboleke ngokuphelele kumaphrojekthi wokwakha ahlukahlukene kakhulu. Ubungcweti obukhulu, isipiliyoni emkhakheni, ubudlelwano obuhlanganisiwe nabakhiqizi abahamba phambili: isiqinisekiso sokwethenjwa nokukhethekile. Amanani we-FOB.
I-Estline srl eSanto Domingo - Amakhishi WaseYurophu Ephakathi kanye nefenisha ekhishini
I-Estline srl di UGiovanni Mazzù, eCalle Sanchez 21, a Santo Domingo, akayedwa Umthengisi e Ngenisa ukuthumela ngaphandle di Imabula yaseGibhithe Ibalulekile embonini yezokwakha, kepha yinkampani ekhethekile Ngenisa ukuthumela ngaphandle di Amakhishi WaseYurophu Ephakathi kanye nefenisha ekhishini. I-Estline srl inikeza Ukukhetha kwe Amakhishi WaseYurophu Ephakathi kanye nefenisha ekhishini kubonakaliswa ngu izinhlobo ezahlukene zemigqa nobukhulu, izinto zokuhlobisa ezinomlingiswa oqinile, izingoma ngaphandle kwemingcele yokunambitha nezidingo ezisebenzayo, ukwenza ngokwezifiso okukhulu zombili ngemininingwane nangemibala. Amakhishi WaseYurophu Ephakathi kanye nefenisha ekhishini che umele phezulu kwe-aesthetics nokusebenza: I-Estline srl nguGiovanni Mazzù ukhethe izixazululo ezinhle kakhulu kuwe futhi waqhosha ukusebenzisana okuhlonishwayo nabakhiqizi abahle kakhulu Amakhishi WaseYurophu Ephakathi kanye nefenisha ekhishini. Skuqondwe kuphelele di ubuciko obunamakhono nobuchwepheshe obuphakeme, i Amakhishi WaseYurophu Ephakathi kanye nefenisha ekhishini zazo I-Estline srl, a Santo Domingo, kunjalo Ngenisa ukuthumela ngaphandle bahlanganisa ukusebenza nokusebenziseka ngeumthelela omkhulu nokunambitheka okukhanyayo. Ngaphezu kwalokho, amathuba angenamkhawulo okwenza ngezifiso ukwakheka kwezimo, imigqa, izingoma nemibala kuyenza Amakhishi WaseYurophu Ephakathi kanye nefenisha ekhishini izixazululo eziphelele zezindawo zakho. Thenga ikhono elikhulu nobuchwepheshe be I-Estline srl nguGiovanni Mazzù, a Santo Domingo, umholi kulo mkhakha Ngenisa ukuthumela ngaphandle di Amakhishi WaseYurophu Ephakathi kanye nefenisha ekhishini. Amanani we-FOB.
I-Estline srl eSanto Domingo - Izinto zokwakha namakhishi okunethezeka
I-Estline srl di UGiovanni Mazzù, a Santo Domingo, ihlinzeka ngezixazululo ezibhekiswe embonini yezokwakha ngokukhetha ngokucophelela okuhle kakhulu Imabula yaseGibhithe futhi of Izinto zokwakha okwayo Umthengisi e Ngenisa ukuthumela ngaphandle iphephile futhi ithembekile. Ngaphezu kwalokho, I-Estline srl inobudlelwano obukhethekile nabakhiqizi abahle kakhulu be Amakhishi WaseYurophu Ephakathi kanye nefenisha ekhishini futhi ngenxa yalesi sizathu iyakwazi ukuhlinzeka ngezixazululo ezahlukahlukene zemvelo. Ukugqama emkhakheni we Ngenisa ukuthumela ngaphandle zombili ze Imabula yaseGibhithe Ibalulekile ekwakheni, zombili ze Amakhishi WaseYurophu Ephakathi kanye nefenisha ekhishini, Sekela i-srl ye UGiovanni Mazzù, a Santo Domingo, uyisiqinisekiso se-Professionalism and Reliability, futhi sibonga ngokuba khona kweminyaka eminingi enkundleni.
I-Estline srl eSanto Domingo - Ubuchwepheshe nekhwalithi enhle
I-Estline srl nguGiovanni Mazzù, eCalle Sanchez 21, a Santo Domingo, kunjalo Umthengisi e Ngenisa ukuthumela ngaphandle di Imabula yaseGibhithe Ibalulekile emkhakheni wezokwakha, ilungele ikakhulukazi ukutholwa kokugqokwa. Ikakhulu, i Imabula yaseGibhithe zikhethwe ngokucophelela futhi basebenze ngokukhethekile ukwakha imbobo yokunethezeka, imikhiqizo ekhethekile neminye imisebenzi eminingi ebalulekile yokwakha. Ngenxa yokubambisana okuhlangene nabakhiqizi abahle kakhulu be Imabula yaseGibhithe Ibalulekile ekwakheni, Hola nguGiovanni Mazzù, a Santo Domingo, kunjalo Ukwethembeka kanye nokuqothuka. Ngaphezu kwalokho, I-Estline srl è Ngenisa ukuthumela ngaphandle di Amakhishi WaseYurophu Ephakathi kanye nefenisha ekhishini ikhwalithi ephezulu kakhulu futhi yenziwe ngokwezifiso ngokwedlulele. Amakhishi WaseYurophu Ephakathi kanye nefenisha ekhishini che umele inhlanganisela ephelele yama-aesthetics nokusebenza: I-Estline srl yeGiovanni Mazzù ikhethe izixazululo ezinhle kakhulu futhi inokubambisana ngokubambisana nabakhiqizi abahamba phambili be Amakhishi WaseYurophu Ephakathi kanye nefenisha ekhishini. Thembela kubungcweti kanye nesipiliyoni esihle se I-Estline srl nguGiovanni Mazzù, a Santo Domingo.
Ikheli: I-Via Immacolata, 88 - I-Barcelona PG
Isihlalo 2: UCalle Sanchez, 21
Idolobha: Santo Domingo
I-POSTAL CODE: 10210
Izwe: i-Dominican Republic
Ucingo: 090 9701119
Yefeksi: +0577 1959594 XNUMX (ITA)
Inombolo ye-VAT: RNC131224229